Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : /bins/ohabolana/tsara.mg.aj
Ohabolana Antova a Sahalampona, anin-tompontany tsara; anim-bahiny mahafaty. [Samson 1965 #A86]
Ohabolana Dihin’ i Kalavonenana : avanavany ka tsara, fanoerana anazy tsy hainy. [Samson 1965 #D8]
Ohabolana Finari-dratsy hoatry ny didimaso tsara ondana. [Veyrières 1913 #3272]
Ohabolana Ho tsara mandroso, ho tsara miverina. [Veyrières 1913 #4134]
Ohabolana Lainga tsara lahatra ka mandrobo ny mpihaino. [Rinara 1974 #1682]
Ohabolana Mahafisaka ny lela : mijoro ny tsara. [Samson 1965 #M6]
Ohabolana Mahia nohatsaraina toa hisatra. [Rinara 1974 #1878]
Ohabolana Mamy ny fary, fa misy faikany ; mamy n' akondro, fa misy hodiny ; ary tsara ny raozy, fa misy tsilony. [Nicol 1935 #480]
Ohabolana Matokia manenona, fa tsara kofehy hanenjanana. [Rinara 1974 #2188, Cousins 1871]
Ohabolana Mianara mamindra, fandrao bingo ; mahaiza mitsako, sao kenda; misakafoa tsara mba tsy ho reraka. [Veyrières 1913 #6189]
Ohabolana Miaraka amin' ny ferena, ka ny tsara fanahy no maimbo. [Houlder 1895 #281]
Ohabolana Mihazakazaka tratran' ny miadana. [Rajemisa 1985]
Ohabolana Miorena tsara raha hiorina, fa aza manao sarin-domano. [Veyrières 1913 #3356]
Ohabolana Mody mandefitra (tsara imaso) kanjo handrobo. [Rinara 1974 #2547]
Ohabolana Na tsara aza ny mizara, ny hizara sofin-toho mahasanganehana. [Rinara 1974 #2772]
Ohabolana Ny fahamarinana no mpiaro tsara indrindra. [Veyrières 1913 #2957]
Ohabolana Ny fitiavana no tsara noho ny rakitra saro-bidy. [Veyrières 1913 #5121]
Ohabolana Ny marina mitavozavoza tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. [Rajemisa 1985]
Ohabolana Ny miara-komana no tsara, hoy Rainibango. [Rinara 1974 #3144, Cousins 1871 #2347]
Ohabolana Ny raharaha maharitra ela no tsara indrindra. [Veyrières 1913 #3290]
Ohabolana Ny raharaha no lavorary : ny tenierana no tsara. [Rinara 1974 #3210]
Ohabolana Ny roa no tsara noho ny iray; raha lavo, misy mpanarina. [Houlder 1895 #243]
Ohabolana Oro tavin’ i Tsiangoana : may tsara, tsy may tsara. [Samson 1965 #O26]
Ohabolana Raha misy milaza azy ho amalon-javatra, ny aty kosa fintana tsara tefy. [Rinara 1974 #234]
Ohabolana Raha mpivady tsy hifanaja, ka dia ny mianadahy mifanaja no tsara. [Veyrières 1913]
Ohabolana Raha vinanto tsara fividy ka mitondra ny matomperiny ary mivimbina ny avany, dia tsy mba vinanto fa isan-janaka indrindra. [Houlder 1895 #1852, Veyrières 1913 #1472]
Ohabolana Randran-dRenivarengina : ny tsy nanina tsara tahatry ny tsy nanina. [Samson 1965 #R25]
Ohabolana Ranomasina tsara tsinjovina; fanahim-bady tsara tsy hita. [Samson 1965 #R40]
Ohabolana Sabakaka ambody riana : tsara toerana, fa tsy mahita tory. [Cousins 1871 #2809, Nicol 1935 #279]
Ohabolana Sora-damba tran-tompony : tsara fidy loatra. [Samson 1965 #S45]
Ohabolana Tandroho tsara ladina no ao ka aza mitsipelika ho amalon-javatra! [Rinara 1974 #4040]
Ohabolana Tanimanga voaevotra, ka miampy kely dia takotra. [Rinara 1974 #4043]
Ohabolana Tohy vakan’ Antalaotra, tsara lahatra. [Samson 1965 #T78]
Ohabolana Tolon’ aomby an-tsavoka : tsy azoazoko tsara. [Samson 1965 #T84]
Ohabolana Tombo-dambo alina : mahavoa tsara, tsy mahavoa tsara. [Samson 1965 #T101]
Ohabolana Traotrao vandana, kibo voananto : izay tiam-bady tsara fanahy. [Samson 1965 #T128]
Ohabolana Tsara didy fa misy tangozany; tsara hatsaka fa misy volony. [Houlder 1895 #2307]
Ohabolana Tsara fa tsy angatra. [Veyrières 1913 #5967]
Ohabolana Tsara hateloana, hoatry ny be volombava noharasana. [Veyrières 1913 #1724]
Ohabolana Tsara miankandrefana hoatry ny miaramila rombina. [Veyrières 1913 #4031]
Ohabolana Tsara mim-bahiny : tsara voadonan-dananana. [Samson 1965 #T136]
Ohabolana Tsara min-tambako : tsara mahamamo. [Samson 1965 #T137]
Ohabolana Tsara Ramatoa, tsara Raivo, fa i Fara manan-tombo kokoa. [Rinara 1974 #4412]
Ohabolana Tsara vava ka mahafa-kenatra, mahay mihatsaravelatsihy ka tsy hita kilema loatra. [Rinara 1974 #4414]
Ohabolana Valavala ny hataka, tambiko ny laho ; mahavoa tsara, tsy mahavoa tsara. [Samson 1965 #V10]
Ohabolana Veloma, soava tsara. [Veyrières 1913 #4181]
Ohabolana "Veloma, soava tsara" , tsy mahavelom-bady aman-janaka. [Cousins 1871 #3659, Houlder 1895]
Ohabolana Voahangy tsara vaventy fihaingoa-mahafa-kenatra. [Veyrières 1913 #2476, Rinara 1974 #4965, Cousins 1871 #3689]
Ohabolana Voalongoza lanim-panaloka : tsara manam-boho. [Samson 1965 #V72]
Ohabolana Vorondolo mitera-boromanga ka tsara indray noho rainy. [Houlder 1895 #1895]